Photoshop CS3 नि:शुल्क प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Adobe Photoshop CS3
द्वारा Ann Young, Naveen Pokhrel 2022-06-25, Nepali Blog
संगत: विन्डोज, म्याक
के तपाइँ Adobe Photoshop CS3 डाउनलोड गर्ने तरिकाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? यस लेखमा, म तपाईंलाई बताउनेछु किन तपाईंले फोटोशपको पायरेटेड संस्करणहरू डाउनलोड गर्नु हुँदैन र यसले निम्त्याउन सक्ने सबै समस्याहरू। म तपाईंलाई5कार्यक्रमहरूको सूची पनि दिनेछु जुन कार्यक्षमता र क्षमताहरूमा यो ग्राफिक्स सम्पादकसँग मिल्दोजुल्दो छ।
Photoshop CS3 लाभहरू
क्यामेरा RAW बाट फाइलहरूको राम्रो समर्थन
द्रुत चयन उपकरण
B&w छविहरूमा खैरो नियन्त्रणको शेडहरू
मोबाइल उपकरणहरूको लागि ग्राफिक्स अप्टिमाइजेसन
Panoramic छविहरू सिर्जना गर्न Photomerge उपकरण
म फोटोशप CS3 कहाँ डाउनलोड गर्न सक्छु?
समय-समयमा, Adobe ले बजार र यसका ग्राहकहरूको मागहरू परिवर्तन गर्ने तरिकाका कारण आफ्ना उत्पादनहरू बेच्न, विकास गर्न वा समर्थन गर्न बन्द गर्छ। यो कारण हो कि तपाइँ विकासकर्ताको वेबसाइटबाट Adobe Photoshop CS3 डाउनलोड गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। यद्यपि, तपाइँ त्यहाँ अपडेट गरिएको, सुधारिएको संस्करण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
Photoshop को लागी एक परीक्षण अवधि छ?
हो, तपाइँ7दिनको लागि नि: शुल्क कार्यक्रम परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्न Photoshop परीक्षण संस्करण, तपाइँ तपाइँको Adobe ID र पासवर्ड संग प्रणाली लग इन गर्न आवश्यक छ।
के म धेरै कम्प्युटरहरूमा Photoshop स्थापना गर्न सक्छु?
बिल्कुल। तपाईले फोटोशप र अन्य क्रिएटिभ क्लाउड एपहरू दुईवटा कम्प्युटरमा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको सहयोगमा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ Photoshop स्थापनाकर्ता । यदि तपाइँ यसलाई तेस्रोमा स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँले तपाइँको अन्य दुई पीसी मध्ये एकमा यसलाई निष्क्रिय गर्नुपर्नेछ।
यदि मसँग Adobe Photoshop CS3 को लागि स्थापना सीडी छ भने, के म नयाँ पीसीमा कार्यक्रम स्थापना गर्न सक्छु?
पुरानो Photoshop संस्करणहरू आधुनिक अपरेटिङ सिस्टमहरूमा विकसित वा परीक्षण गरिएको छैन। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको पीसीले तपाइँको फोटोशपको संस्करणको लागि प्रणाली आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
के म फोटोशपको पुरानो र नयाँ संस्करणहरू एकैसाथ प्रयोग गर्न सक्छु?
हो, तपाईं एउटै पीसीमा फोटोशपका धेरै संस्करणहरू स्थापना र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबै उपलब्ध संस्करणहरू क्रिएटिभ क्लाउड डेस्कटप एपमा सङ्कलन गरिएका छन्।
कार्यक्रमको नयाँ संस्करण र Adobe Photoshop CS3 बीच के भिन्नताहरू छन्?
Photoshop CC को नवीनतम संस्करण (2022.23.1) या त PC वा iPad मा स्थापना गर्न सकिन्छ। तपाईँको काम क्लाउड भण्डारणमा बचत गरिनेछ, तपाईँलाई कुनै पनि समय र कुनै पनि उपकरणबाट रचनात्मक हुन सक्षम बनाउँदै। विकासकर्ताहरूले प्लगइनहरू अद्यावधिक गरेका छन्, नयाँ ग्रेडियन्ट सुविधाहरू, टेम्प्लेटहरू र तह शैलीहरू थपेका छन्। पुराना उपकरणहरू अझै पनि छन्, तर तिनीहरू छुट्टै खण्डमा जम्मा गरिएका छन्।
पछिल्लो संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्
पायरेटेड संस्करण Photoshop CS3
यद्यपि कार्यक्रमको यो संस्करण अब समर्थित छैन, त्यहाँ तेस्रो-पक्ष वेबसाइटहरू छन् जसले अझै पनि Photoshop CS3 नि: शुल्क डाउनलोडहरू प्रस्ताव गर्दछ किनभने प्रयोगकर्ताहरूले अझै पुरानो संस्करण खोजिरहेका छन्।
जब तपाइँ यस्तो वेबसाइटबाट फाइलहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ, तपाइँ सफ्टवेयर प्राप्त गर्ने जोखिममा हुनुहुन्छ जसमा धेरै त्रुटिहरू र खराबीहरू छन्, तपाइँको पीसीलाई मालवेयरले संक्रमित गर्दछ र कानूनको साथ समस्यामा पर्न सक्छ। लाइसेन्स नभएको सफ्टवेयरको प्रयोग कत्तिको खतरनाक छ भनेर जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
बारे थप जान्नुहोस् Photoshop ढिलो ।
प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन
Adobe डाउनलोड गर्ने जो कोहीको लागि त्यहाँ आपराधिक दायित्व छ आईप्याडको लागि Photoshop वा अन्य वेबसाइटहरूबाट डेस्कटप कम्प्युटरहरू। यो एक प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन हो, र संयुक्त राज्य अमेरिका मा, यो दुई हजार डलर को जरिवाना वा5वर्ष जेल सजाय हुन्छ।
तपाईंले Adobe Photoshop CS3 लाई एक अविश्वसनीय स्रोतबाट नि: शुल्क डाउनलोडको साथ सामना गर्न सक्ने अर्को समस्या मालवेयर हो। ध्यान दिनुहोस् कि ट्रोजनहरू हरेक दिन "चतुर" बनिरहेका छन्। तपाईंको प्रणालीलाई हानि पुर्‍याउनुको अलावा, तिनीहरूले तपाईंको व्यक्तिगत डाटा चोर्न सक्छन्। नतिजाको रूपमा, तपाईंले तिनीहरूबाट आफ्नो पीसी "उपचार" गर्नुपर्नेछ। इजाजतपत्र प्राप्त सफ्टवेयर सुरक्षित र तपाइँको डेटा को लागी कुनै खतरा बिना प्रयोग गर्न को लागी सुरक्षित छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ Adobe Creative Cloud नि: शुल्क परीक्षण र आवश्यक सफ्टवेयर को सुविधाहरू परीक्षण।
यदि तपाइँसँग Photoshop कानूनी रूपमा प्रयोग गर्दा कुनै प्रश्नहरू छन् भने, तपाइँ प्राविधिक समर्थनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। पायरेटेड Adobe Photoshop CS3 डाउनलोड गरेर, तपाईंले सबै बगहरू आफैंसँग व्यवहार गर्नुपर्नेछ।
Adobe Photoshop CS3 वैकल्पिक
Photoshop CS3 पुरानो भएको हुनाले, यस कार्यक्रमको नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्ने बारे विचार गर्नुहोस् र तपाईंले 7-दिनको निःशुल्क परीक्षण प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस्। एक हप्ता पछि, तपाईंले या त $ 20.99 मासिक सदस्यता खरिद गर्न वा उत्कृष्ट विकल्प खोज्न आवश्यक छ। मैले फोटोशपको सट्टा प्रयोग गर्न सकिने ग्राफिक्स सम्पादकहरूको सूची सँगै राखेको छु।
LUMINAR निःशुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
कुशल RAW रूपान्तरण
Adobe अनुप्रयोगहरूको लागि प्लगइन
लेन्स प्रोफाइल छैन
फोटोशपको तुलनामा धेरै ढिलो
Skylum को Luminar4सँग फोटो सम्पादन पक्षलाई आफ्नो कामको सरल बनाउन चाहने फोटोग्राफरहरूका लागि सबैभन्दा सहज उपकरणहरू छन्। सफ्टवेयरले शक्तिशाली एआई टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्दछ जसले छवि सम्पादन प्रक्रियालाई गति दिन मद्दत गर्दछ। मलाई आकाश प्रतिस्थापन सुविधा धेरै रमाइलो छ। यसले तपाईंलाई माउसको एक क्लिकमा आकाश परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ।
GIMP नि:शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
खुला स्रोत कार्यक्रम
धेरै प्लगइनहरू, तह मास्कहरू, फिल्टरहरू
गहिरो छवि वृद्धि
लगभग कुनै पनि तस्वीर फाइल ढाँचा संग काम गर्दछ
अलि बढी जटिल इन्टरफेस
Photoshop कार्यहरूको लागि कुनै एनालगहरू छैनन्
GIMP खुला स्रोत कोडको साथ एक नि: शुल्क छवि सम्पादक हो। तपाइँ या त कार्यक्रमको डेस्कटप वा अनलाइन संस्करणमा काम गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यो Adobe Photoshop CS3 वैकल्पिक आवाज कम गर्न, सही रङहरू, ब्रश र ग्रेडियन्ट उपकरणहरूसँग काम गर्न, साथै कोलाज र पोस्टरहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं GIMP सँग काम गर्न Photoshop प्लगइन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विकासकर्ताहरू कुनै पनि बग र ढिलाइहरू हटाउन आफ्नो खुट्टामा छिटो छन्।
PHOTO POS PRO नि:शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
तहहरू सम्पादन गर्न सकिन्छ
प्रभाव र फिल्टर को महान छनोट
धेरै ब्रशहरू जुन अनुकूलित गर्न सकिन्छ
पाठ फ्रेमहरू भित्र पाठ प्रवाह हुन्छ
तह डुप्लिकेटहरू सिर्जना गर्न गाह्रो छ
उपकरण प्यालेटमा किबोर्ड सर्टकटहरू छैनन्
फोटो पोस प्रो एक पिक्सेल ग्राफिक्स सम्पादक हो जुन दुबै शुरुआती र विशेषज्ञहरूले उपयोगी पाउनेछन्। तपाईंले दागहरू, दागहरू र रातो-आँखा प्रभाव हटाउन तहहरू, अनुकूल ब्रशहरू र उपचार उपकरणको साथ फोटो रिटचिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यस बाहेक, तपाईंले विभिन्न प्रकारका कलात्मक प्रभावहरू, बनावटहरू, ढाँचाहरू, आदि फेला पार्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई ग्राउन्ड अपबाट परियोजना सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
PIXLR नि:शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
मोबाइल संस्करण छ
धेरै द्रुत-फिक्स उपकरणहरू
तह र मास्क समर्थन
तपाइँको पीसी वा URL बाट फोटो खोल्नेछ
Pixlr एक फ्ल्यास-आधारित छवि सम्पादन अनलाइन एप हो। Pixlr को4संस्करणहरू छन् (प्रो, सम्पादक, X वा एक्सप्रेस) बाट छनौट गर्न। यसको मुख्य फाइदा यसको अद्भुत कार्यक्षमता, प्रयोगको सरलता र सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्धता हो। यो Adobe Photoshop CS3 वैकल्पिकले द्रुत पोर्ट्रेट रिटच गर्ने कार्यलाई धेरै राम्रोसँग गर्दछ, तपाईंलाई छविको भिजुअल टोन परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ, र रेखाचित्र र ग्राफिक डिजाइनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
PAINT.NET नि:शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
नि: शुल्क प्लगइनहरू
राम्रो संगठित UI
छवि सुधारका लागि उपकरणहरूको विस्तृत चयन
Paint.NET एक साधारण छवि र फोटो सम्पादक हो। यसमा तह, वक्र र स्तरहरू सहित सबैभन्दा आधारभूत तस्विर सम्पादन उपकरणहरूको चयन छ। यद्यपि उपकरण र फिल्टरहरूको सेट बरु सीमित छ, कार्यक्रमले धेरै नि: शुल्क प्लगइनहरूलाई समर्थन गर्दछ। धेरै फोटोग्राफरहरू र ग्राफिक्स डिजाइनरहरूले Paint.NET प्रयोग गर्छन्, जसको मतलब त्यहाँ कार्यशालाहरू र ट्यूटोरियलहरू, साथै धेरै प्रश्नहरूको जवाफहरू सहित धेरै फोरमहरू छन्।
तस्बिर सम्पादनमा तपाईंको घण्टा बचत गर्न, मैले नि:शुल्क कार्यहरू रोजेको छु। तपाईं उत्तम छविहरू प्राप्त गर्नबाट एक क्लिक टाढा हुनुहुनेछ।
Photoshop CS3 डाउनलोड गर्नुहोस्
दुबै शुरुआती र व्यावसायिक फोटोग्राफरहरूले Adobe Photoshop CS3 लाई यसको उन्नत क्षमताहरू जस्तै स्मार्ट फिल्टरहरू, कालो र सेतो छविहरू, तहहरू, इत्यादिका लागि छनौट गर्छन्। तपाईंले Photoshop CS3 लाई तपाईंको लागि काम गर्छ कि भनेर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
Adobe Animate मुक्त
कसरी Photoshop CS5 नि: शुल्क र कानूनी रूपमा प्राप्त गर्ने
Adobe Premiere Elements: शुल्क